Shiinaha jajabay buundada aluminium daaqad soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Mujiang
Gaar ahaan, sababtoo ah aluminiumka aluminiumku waa bir, wuxuu si dhaqso leh u sameeyaa kuleylka, markaa marka uu jiro farqi weyn oo u dhexeeya heerkulka gudaha iyo dibedda, aluminium aluminium wuxuu noqon karaa "buundo" lagu wareejiyo kuleylka. Haddii walxahaas oo kale laga sameeyo albaabbo iyo daaqado, waxqabadka kuleylka kuleylka ayaa xumaan doona. Buundada jajaban ee aluminium aluminiumku waa inay ka soocdo aluminiumka aluminium dhexda. Waxay isticmaashaa balaastiig adag si ay isugu xirto aluminiumka aluminiumka ah ee jabay gebi ahaanba. Waan ognahay in kuleylka kuleylka balaastiggu uu si muuqata uga gaagaaban yahay kan birta, sidaa darteed kuleylka ma sahlana in la mariyo maaddada oo dhan, iyo waxqabadka kuleylka kuleylka ee maaddada ayaa la hagaajiyay. Kani waa asalka magaca "buundada jebisa aluminiumka (alloy)".
1. Aluminiumka biriijka ee jabay wuxuu leeyahay kuleyliyaha kuleylka wanaagsan. Wareegyada gudaha iyo dibedda ee astaamaha kuleylka kuleylka waxaa lagu daraa jilicsanaan. Qaabdhismeedka ayaa si adag loogu xiray hal xarig oo caag ah iyo labo xarig oo dhogor ah. Waxay leedahay cidhiidhi hawo fiican leh iyo cidhiidhi biyo ah iyo waxqabadka kuleylka oo aad u fiican. Daaqadda daaqaddu waxay qaadataa qaab-dhismeedka muraayad madhan, taas oo ka dhigaysa daaqadda runti inay muujiso dahaadhka dhawaqa oo aad u fiican, kuleylka kuleylka, ilaalinta kuleylka iyo shaqada, keydinta kharash badan oo kuleyliyaha iyo qaboojinta Qiimaha kuleylka ee kuleylka ayaa ka yar 2.23-2.94w / m2 · K Saamaynta keydinta tamarta waa mid cajiib ah, kharashka keydinta tamarta ee dhowr sano ayaa ku filan inuu ka soo kabto maalgashigii hore.
3. Uumaysiga ka hortagga iyo qabowga buundada jajaban ee aluminium. Buundada jabisa astaanta aluminium waxay xaqiijin kartaa qaab dhismeedka albaabka iyo daaqadaha ee saddexda geesood ah, oo si macquul ah u kala soocda qolka uumiga biyaha, si guul leh u xaqiijiya dheelitirka biyaha gaaska isobaric, oo si weyn u hagaajinaya cidhiidhiga biyaha iyo cidhiidhiga hawada ee albaabbada iyo daaqadaha, laguna gaadho saamaynta daaqado nadiif ah oo dhalaalaya.
4. Naqshadaynta daaqada shaashadda kaneecada kahortagta ee buundada jabtay. Daaqadda shaashadda aan la arki karin ayaa lagu rakibi karaa oo loo isticmaali karaa gudaha iyo dibedda. Waxay leedahay saameynta kaneecada lidka ku ah iyo duulista.
5. Xatooyo ka hortagga iyo aaladda furitaanka ka hortagga aluminium jebinta. Ku qalabeysan qufulka qalabka dhibcaha badan oo gaar ah si loo hubiyo xasilloonida iyo badbaadada daaqadaha la adeegsanayo.
Aluminum Buundada jajaban ee aluminiumku waxay leedahay waxqabadka dahaadhka codka wanaagsan .. Qaab dhismeedkeeda si taxaddar leh ayaa loo qaabeeyey oo kala-goysyadu way adag yihiin. Natiijooyinka baaritaanka waxay muujinayaan in dahaarka codka ee hawadu uu gaarayo 30-40db, taas oo hubin karta in dadka degan 50 mitir labada dhinac ee wadada weyn aysan ku dhibin buuq, iyo magaalada hoose ee hareeraheeda ayaa sidoo kale xaqiijin kara xasilloonida gudaha iyo diirimaadka.
Hore: Albaabka CPL
Xiga: Daaqadda daaqadda
Habka furitaanka cusub